Fraịde, Ọktọba 21, 2016 Douglas Karr
Lọ ọrụ na-ere ahịa email kasị ukwuu n'Australia na-amụba ugbu a na United States, na-enye ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ na-ere ahịa ahịa ahịa nke a na-ahụkarị, na ọnụ ahịa dị ọnụ ala. Vision6 bụ agbakwunyere email ahịa akpaaka ngwọta wuru maka ndị na-ere ahịa na ụlọ ọrụ. Vision6 integrates email akpaaka, SMS, ụdị na-elekọta mmadụ media na mfe iji interface. Ọtụtụ puku ụlọ ọrụ dijitalụ gụnyere Clemenger BBDO Australia, yana ndị ahịa ahịa dị n'ime ụlọ ọrụ gụnyere Audi Sydney, BMW
Ọ bụ ihe na-awụ akpata oyi n'ahụ mana ọtụtụ ndị na-eji ekwentị ha agụ email karịa ịme oku ekwentị (tinye okwu mkparị banyere njikọta ebe a). Zụta ihe ochie ekwentị ụdị dara site na 17% afọ karịa afọ na 180% ndị ọzọ na-azụ ahịa na-tinye n'ọrụ ha ama ka ịhụchalụ, iyo, na-agụ email karịa ka a afọ ole na ole gara aga. Otú ọ dị, nsogbu bụ na ngwa email adịghị aga ngwa ngwa dị ka ihe nchọgharị weebụ nwere. Anyi ka diri